भिनिसीयस जुनियरलाई रियल म्याड्रिडले भित्र्यायो,को हुन् भिनिसीयस जुनियर ? - Khabar Break | Khabar Break
दम्पत्तिको हत्या गरी फरार रहेका साह १४ वर्षपछि पक्राउ
रुस विश्वकप २०१८
भिनिसीयस जुनियरलाई रियल म्याड्रिडले भित्र्यायो,को हुन् भिनिसीयस जुनियर ?
स्पेनिस क्लब रियल म्याड्रिडले ब्राजिलका युवा सेन्सेसनल भिनिसीयस जुनियरलाई भित्राएको छ । १८ बर्षिय भिनिसीयसलाई ब्राजिलका ‘नयाँ नेइमार’को रुपमा हेरिएको छ ।
रियल म्याड्रिडले उनीसँग गतबर्ष नै ४५ मिलियन युरोमा सम्झौता गरेको थियो । उनको उमेर १८ बर्ष नपुगेका कारण रियलले एक बर्ष पर्खेर शुक्रबार उनलाई औपचारीक रुपमा भित्राएको छ ।
उनलाई विश्वफुटब का नयाँ स्टारको रुपमा हेरिएको छ । १८ बर्षको उमेरमा नै उनले ब्राजिललाई अन्डर १७ को दक्षिण अमेरिकी च्याम्पियन बनिसकेका छन् । उनी ब्राजिलको क्लब फ्लामेन्गोबाट औपचारिक रुपमा रियल म्याड्रिड आएका छन् ।
को हुन् भिनिसीयस जुनियर ?
१० बर्षको उमेरदेखि फुटबल खेल्न थालेका भिनिसियसको जीवन २०१७ मा पुरै बदलियो । भिनिसियसले ब्राजिललाई अन्डर १७ को दक्षिण अमेरिकी च्याम्पियन बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेले । सो प्रतियोगितामा ७ गोल गर्दै उनी प्रतियोगिताको उत्कृष्ट खेलाडी बन्नासाथ स्पेनिस महारथी रियल म्याड्रिडको नजरमा परे । रियलले गत मे मै उनलाई ४५ मिलियन युरोमा तुरुन्त साइन गरिहाल्यो । उमेर नपुगेका कारण भिनिसियस १८ बर्ष पुग्नासाथ रियल म्याड्रिडमा आएका हुन् ।
सिनियर टिममा डेभ्यु गर्न बाँकी रहेका भिनिसियसलाई रियलले दिएको अफर सबैका लागि आश्चर्य पर्ने खालको थियो ।
भिनिसियस १३ बर्षकै उमेरमा ब्राजिलको अन्डर १५ टिममा परेका थिए । उनले २०१५ को दक्षिण अमेरिकी च्याम्पियनसिपमा ब्राजिललाई उपाधि जिताउन महत्वपूर्ण भूमिका खेले ।
सो प्रतियोगितामा उनले ६ खेलमा ६ गोल गरे भने ५ गोल असिस्ट पनि गरे । १७ बर्षको उमेरमा ब्राजिललाई दुई पटक कन्टिनेन्टल च्याम्पियनसिपको उपाधि जिताई सकेका भिनिसियस अब रियल म्याड्रिडमा व्यावसायिक फुटबल खेल्न तयार छन् ।
भिनिसियसले आफु रियल म्याड्रिडका डेभ्यु गर्न अत्यन्त उत्साहित रहेको बताएका छन् । यसअघि उनले क्रिस्टियानो रोनाल्डोसँग कुरा गरेको र रोनाल्डोले आफुलाई शुभकामना दिदै रियलमा खेल्न कहिले आउने भनेर सोधेको बताएका थिए । आफु रोनाल्डोको खेलबाट प्रभावित भएको बताउदै भिनिसियसले आफ्नो आइडल भने नेइमार नै रहेको बताए ।
गत मे मा क्लब फुटबलमा सिनियर टिमबाट डेभ्यु गरेका भिनिसियसले आफ्नो बचपनको हिरो रोबिन्होविरुद्ध खेलेका थिए । सो खेलका बारेमा बोल्दै उनले भने,‘त्यो मेरो र मेरो परिवारको सपना पुरा भएको दिन थियो ।’
रोबिन्होलाई आफु सानो छदा आफ्नो आइडियल मानेपनि उनि नेइमार र रोनाल्डिन्होको खेलबाट बढी प्रभावित रहेको बताउछन् ।भिनिसियस खेलाडीको रुपमा पूर्ण फुटबलरको रुपमा अगाडी आएका छन् । उनि अत्यन्त छिटो छन् र स्किलफुल पनि देखिन्छन् । विरोधी डिफेन्डरलाई अत्यन्तै छिटो झुकाउन उनि माहिर देखिन्छन् । साथै ब्राजिलको परम्परागत ड्रीबलिङमा पनि उनि उत्कृष्ट देखिएका छन् । उनले आफ्ना दुवै खुट्टाबाट लामो दुरीमा पास दिन सक्ने क्षमता राख्छन् । भिनिसियसलाई ब्राजिलका ‘नयाँ नेइमार’ को उपाधि दिइएको छ ।
आफुलाई नयाँ नेइमारको उपाधि दिएकोमा उनी भन्छन्, ‘मैले यस कुरालाई त्यति ध्यान दिदैन, तर मैले जहिले पनि नेइमारको खेललाई हेरिरहेको हुन्छु । पछिल्लो समय म उनीसँग बढी नै सम्पर्कमा छु ।’
तर म अर्को नेइमार भन्दा पनि मेरो आफ्नो करिअर आफ्नै किसिमले बनाउन चाहन्छु जसले सम्पूर्ण ब्राजिललाई खुशी राख्न सकोस् । ब्राजिलको क्लब फ्लामेन्गोबाट अहिले सिनियर लेभलमा व्यावसायिक फुटबल खेलिरहेका भिनिसियस धेरै जसो खेलमा बेन्चमा बसेपनि ६९ खेलमा १४ गोल गरेका छन् ।
अब उनको लक्ष्य ब्राजिलको सिनियर टिम रहेको उनले बताएका छन् । रियल म्याड्रिड गएर आफ्नो सपना पुरा भएको भएपनि आफ्नो प्रमुख लक्ष्य छिटो भन्दा छिटो राष्ट्रिय टिममा डेभ्यु गर्ने रहेको बताएका छन् ।
ओम्याक्स सिनेमा हल जल्दा पाँच करोड बढीको क्षति
सन् २०३० को विश्वकप आयोजना गर्ने इंग्ल्यान्डको दाबी
जर्मन फुटबल स्टार मेसुत ओजिलले अब राष्ट्रिय टोलीबाट नखेल्ने
‘सर्वोत्कृष्ट पुरुष फुटबल’को उपाधि रोनाल्डोलाई
कमेन्टहरु बन्द गरिएको छ ।
म्याड्रिड नजाने भए नेइमार,पिएसजीमै बस्ने
फ्रान्सलाई विश्वकप जिताउने खेलाडी र प्रशिक्षकका नाममा राखियो स्टेसनको नाम
विश्वको मन जित्न सफल क्रोएसियाकी राष्ट्रपति
सन् २०२२ मा हुने विश्वकप फुटबल प्रतियोगिताको सुरक्षा नेपालीले गर्ने !
चर्चित खेलाडी एम्बाप्पेले आफ्नो पुरै कमाई दान दिने